SP-L09 SOICARE 300ml voan-kazo 7 Fitaovana LED menaka manitra aromatherapy ultrasonic diffuser, China SP-L09 SOICARE 300ml varimbazaha 7 Fitaovana mitondra menaka manitra aromatherapy ultrasonic diffuser mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Sunpai Industries Limited
SP-L09 SOICARE varimbazaha 300ml hazo 7 Fitaovana hazavana ilaina amin'ny solika aromatherapy ultrasonic diffuser
SOICARE 300ml voan-kazo 7 Fitaovana LED menaka manitra aromatherapy ultrasonic diffuser
· Fanakatonana ny Waterless Auto sy ny Free BPA ---- Miaraka amin'ny fijanonana tsy misy rano tsy misy rano, dia ho faty ho azy ity «moisturiser» ity rehefa lany ny rano. Izy io dia afaka miaro anao tsy ho voaro ary miaro ilay fitaovana ihany koa. Ny diffuser aromatherapy dia vita amin'ny fitaovana tsy misy BPA, izay 100% tsy misy poizina sy tia tontolo iainana.
· Teknolojia ultrasonia ---- Ny diffuser fofona dia mampiasa onja ultrasonic hanaparitahana avy hatrany ny rano sy ny menaka manitra ao anaty tanky, hamokarana zavona manitra mangatsiaka, ary hamela ny hanitra hitsinkafona amin'ny rivotra, hamandoana ny rivotra. Ho feno fofona ny efitranonao, izay afaka miantoka anao matory tsara kokoa. Tonga lafatra ho an'ny efitrano fandriana, efitrano fianarana, birao, efitrano fandraisam-bahiny, yoga, SPA, efitrano zaza sns.
· Jiro LED 7 miova loko ---- Ny jiro LED dia azo apetraka amin'ny loko 7 mampitony. Azonao atao ny mivezivezy amin'ny loko 7, na mametraka azy amin'ny loko iray voafaritra. Malalaka ny fiovan'ny lokon'ny fiovana malefaka. Miaraka amin'ny fiovan'ny loko dia afaka mamorona rivo-piainana am-pitiavana izy io.
· Fanomezana tonga lafatra ---- Ny diffuser fofona dia mampiasa famolavolana voan-kazo, toy ny ravina haingo. Safidy tsara ny fampiasana izany ho fanomezana ho an'ny namanao sy ny fianakavianao, ny olon-tianao.
diffuser menaka manitra aromatherapy ultrasound aromatherapy
SP-G48 150ml fampiroboroboana ny fifaninanana fantsom-panafody menaka manitra